'बादशाहको नयाँ लुगा' कथा पढ्नुस् : डा. बाबुराम भट्टराई
‘बादशाहको नयाँ लुगा’ कथा पढ्नुस् : डा. बाबुराम भट्टराई
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार २०:०२
काठमाडौं, २१ मङ्सिर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बादशाहको नयाँ लुगा कथा पढ्न भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि व्यङ्ग गरेका छन् ।
शुक्रबार ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै भट्टराईले त्यस्तो व्यङ्ग गरेका हुन् । ट्वीटमा भट्टराईले लेखेका छन्, ‘प्रम र वरपरकाले आफ्ना आलोचकलाई थला पारिदिने, जुँगाको स्याउँस्याउँ, एनजिओको ट्याउँट्याउँ आदि भन्नु शोभनीय मात्र नभएर लोकतान्त्रिक संस्कार विपरित भयो है । कि हिजो राजतन्त्रविरुद्ध लड्नु बेठीक भन्नुपर्यो, कि लोकतन्त्रमा विरोध सहन सक्नुपर्यो । प्रमले पुनः नयाँ बादशाहको लुगा पढ्ने कि ?’
भट्टराईले ट्वीटमा प्रधानमन्त्री ओली बादशाह बन्न थालेको सङ्गीन आरोप पनि लगाएका छन् । डा. भट्टराईले वाम सरकारको कटु आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । के हो बादशाहको नयाँ लुगा कथा ? यस्तो छ कथाको सारांश ।
एक दिन बादशाहले आफ्नो विश्वासपात्र एक मन्त्रीलाई कपडा बुनेको ठाउँमा हेर्न पठाए । मन्त्री त्यहाँ पुग्दा ती ठगहरु हात चलाएर कपडा बुनिरहेको नाटक गर्दैथिए । मन्त्रीले उनीहरुको हातमा न धागो देखिरहेका थिए, न कपडाको आकार नै थियो । अनि मन्त्रीले अगाडिको कुरा सम्झिए, ‘ओहो ! यिनीहरुले त भन्थे, गद्दारले कपडा देख्न सक्दैन भनेर । म गद्दार पो रहेछु ? उ डरायो । कपडा देखिनँ भनेर आफू गद्दार प्रमाणित हुनुभन्दा उसले कपडा देखेको नाटक गर्न थाल्यो ।
‘जुलाहा’सँग सामान्य कुरा गर्दै कपडाको प्रशंसा गरेर मन्त्री फर्कियो र बादशाहलाई कपडाको बारेमा झुटो खबर सुनायो । उसले आफूले कपडा नदेखेको भन्न सकेन । कपडा सारै राम्रो बनेको र बनाउने काम सकिन लागेको जानकारी गरायो । बादशाहको ढुकुटीबाट ती दुई ठगले सुनचाँदी देखि लिएर विभिन्न कच्चा पदार्थका लागि भन्दै ठूलो परिमाणमा रकम लगिसकेका थिए ।
शहरका सबै जनाले अनौठो गुण भएको त्यो कपडाको बारेमा कुरा गर्न थाले । अन्त्यमा बादशाह आफैँले कपडा तानमा छँदै हेर्न जाने बिचार गरे । धेरै जना भारदारहरूलाई अघिपछि लगाएर बादशाह कपडा बनाइरहेको ठाउँमा पुगे । तानमा ती ठगहरू सकेसम्म मेहनत गरिरहेको देखिन्थ्यो ।
सबैको अगाडि उनले आफूलाई मुर्ख र अयोग्यका रुपमा चिनाउन चाहेनन् । अनि उनले पनि कपडा देखेको नाटक गर्दै जुलाहाहरुको प्रशंसा गर्दै भने, ‘कस्तो राम्रो कपडा बनाएछन्, आहा !’ बादशाहले नै तारिफ गरिसकेपछि त्यहाँ भेला भएका सबैले ताली बजाए । तर कसैले पनि मैले कपडा नै देखिनँ भनेर भन्ने हिम्मत गरेन ।
Tagsडा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति नेपाल बादशाहको नयाँ लुगा